इयु रिपोर्ट सभामुखले किन बुझे ?
काठमाडौं । निर्वाचन पर्यवेक्षण रिपोर्टको नाममा खस आर्यलाई आदिवासीको सूचीबाट हटाउनुपर्नेजस्तो जातीय दङ्गा फैलाउने उद्देश्य प्रेरित दस्तावेज सभामुख कृष्णबहादुर महराले किन बुझे ? अचम्म त के छ भने ईयु प्रतिनिधि क्रिश्चियन हुन् भने सभामुख महरा पनि क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन गरेका व्यक्ति हुन् ।
राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले इयुको धर्म निरपेक्षताको नाममा हिन्दुधर्म समाप्त पार्ने खेल भयो भन्ने आरोप लगाएका छन् । चैत २५ मा बर्दिवास पुगेर थापाले नेपालको कुनै पनि आन्दोलनको एजेण्डा धर्म परिवर्तन नभएको हुन नसक्ने बताएका छन् । उनले पश्चिमी मुलुका दलालहरुको इशारामा केही व्यक्ति र दलले निहित स्वार्थका लागि हिन्दु धर्ममाथि प्रहार गरिरहेकोले सतर्क हुनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष थापाले हिन्दु धर्मको विरुद्वमा विभिन्न भ्रमहरु फैलाउँदै पैसा, पहुँच र विभिन्न लोभ लालचमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउने काम भैरहेको हुँदा त्यसबाट सम्पूर्ण हिन्दु धर्मावालम्बी एक जुट भई सचेत हुन आग्रह पनि गरेका छन् ।